Goatemalà: Ahoana No Hanavotana Ny Tahirim-Pirenena ao La Danta? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2018 15:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2008)
Ny piramida iray amin'ireo goavana indrindra eto ambonin'ny tany, noho ny habeny, dia ny piramida ao Danta, ao Goatemalà no ahitàna azy, ao anatin'ny iray amin'ireo valanjavaboahary tsy fahita firy mitahiry ny tontolon'ny zavamananaina eto amin'ny planeta. Saingy mitera-doza ho an'io valanjavaboahary io ireo doro tanety sy ny tsy firaharahiana. Mety hanimba ny harena sarobidy ara-kolontsaina an'i Goatemalà ny fampandrosoana baranahiny, ireo tavy ataon'ireo mpamboly, ireo fandrobana arkeolojika, ary ny fandripahana ala.
Sady blaogera ihany koa ny governora ao Petén, Rudel Alvarez, ary manoritsoritra ao amin'ny blaoginy ny olana atrehin'ireo valanjavaboahary natoraly ao amin'io faritra io [amin'ny fiteny espanola] izay mahatratra efa manodidina ny 85%-n'ireo faritra arovana ao anatin'ny faritry ny “biosphère Maya”, izay manome ny 13% manontolo amin'ny velarantanin'ny firenena.
Vao haingana no nitsidika an'i Petén ireo mpanao gazety vahiny tsy miankina sy ireo blaogera, noho ny fanohanana ara-bola nataon'ny Ivontoerana Pulitzer, mba handalina ireo antony ara-tsiantifikan'ny fiarovana ny valanjavaboahary sy hitantaràna ny fitsidihan'izy ireo. Ny tetikasa dia atao hoe “Ny hoavin'i Peten” [amin'ny fiteny anglisy]. Manana tombony izy ireo afaka hitsidika ny “Bassin du Mirador“, mihaona amin'ny taleny sy hahatazana ny ny manodidina avy eny an-tendron'ny tontolon'i Maya:
El Mirador, tahaka izay nampahatsiahivan'ny filohan'ny mpikaroka arkeolojika Richard Hansen azy tamin-kafanampo ho antsika omaly, avy eny antampon'ny piramida La Danta, dia tanàna very izay miantso an'ireo faratampony indrindra:
* Sivilizasiona voalohany tsara rindra ho fanjakàna tao amin'ny ilabolantany Andrefana
* Piramida goavana indrindra manerantany (amin'ny habeny)
* Ireo toerana Maya mahafinaritra sy mikitroka be indrindra eto ambonin'ny tany
An'arivony maromaro, angamba olona an'aliny maromaro no nanorina an'io tanàna io nandritra ny 750 taona , 500 taona mialoha an'i JC, saingy efa nonenana hatramin'ny taonjato maro ilay toerana.
Mampalahelo fa, miatrika ireo olana lgoavana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy io valanjaboahary io, ary tokony handraisana fepetra haingana. Nadia Sussmand nandefa lahatsoratra iray mikasika io olana io “Inona no hitranga raha toa tsy hisy ‘éco’ intsony eo alohan'ny teny ‘tourisme'?. (fanamarihan'ny mpandika: éecotourisme dia midika hoe Fizahantany manaja ny tontolo iainana). Amin'izao fotoana izao, namerina fitsidihana an'ireo tranobe manan-tantara niaraka taminay ilay filohan'ny mpahay arkeolojia, sady manazava ireo tetikasany mikasika ny fampandrosoana ny fizahantany manaja ny tontolo iainana ao El Mirador. Resy lahatra i Richard Hansen fa ny fomba tokana hanakanana ny fandripahana ala dia ny famoronana faritra iray manana velarana 810 000 acres (327 807 hektara), tsy azo tapahana, manodidina ireo toerana arkeolojika, ao anatin'ireo sisintany natoraly an'ny kovetabe Mirador. Manamafy izy fa ny karazana fanapahana rehetra – na misy “andraikitra araka ny tontolo iainana” na tsia – na ho ela na ho haingana dia mitarika amin'ny fanamboarana ireo làlana, amin'ny fanaovana tavy an'ireo tany tokony ho volena sy amin'ny famotehana ala tsy azo iverenan-dàlana.
Nanao ny fanadihadiany tamin'ireo blaogy avy eny an-toerana ny tarika, avy any afovoan'ny ala, tahaka izay tantarain'ny iray mpikambana tamin'ilay iraka, Kara Andrade, eo amin'ny blaoginy Oasis [amin'ny fiteny anglisy]:
Ny laboratoara ao anaty ala dia tany lonaka kely iray manome herinaratra sy wifi, ao amin'ny ranomasina maitso eo amin'ny alan'ny fehibolantanin'i Peten, ambany aloka, hazavain'ny hiran'ireo jorery fotsiny, izay ao foana tontolo andro. Isan-kariva, izaho sy David Barreda dia mandeha miaraka amin'ny harona iray misy an'ireo vatoaratra sy ireo fehinkibo fitondrana azy ireny, solosaina entin-tanana roa ary ireo ‘gadgets’ izay hahafahanay mifandray amin'ny tontolo ivelany. Mivoaka an'ilay ala tena mitoka-monina indrindra ao Goatemalà izahay ary manao fitrohana toy ireny sisam-paty mahita rano any anaty tany efitra ireny. Mandraikitra ho anaty lahatsary ary manapika sary araka izay tratra izahay ary matetika no tototra noho ny habetsak'ireo torohay vokarinay. Miadana ny fahatongavan'ireo lahatsoratray ary miaina araka izay fandehan'ny vondrom-pihary herinaratra.
Danta no anaran'ilay piramida, nefa anaran'ny ‘tapir’ iray (biby fianakaviamben'ny soavaly) an'ny faritra ihany koa, ahiana ho lany tamingana. Andiana mpianatra iray no nivondrona mba hiaro ny danta, sy mba hanentana an'ireo mponina eo an-toerana ho fiarovana azy (mihinana tapir ireo olona eto matetika, hena tena tsara, manana tsiro vahiny)
Ny blaogera Mesas de Diaologo mampiseho ny fomba fiarahana miasa aataon'ireo mpianatra amin'ny sekoly mikasika ny Rano sy ny Ala ao amin'ny Anjerimanontolo ambanivohitra ao Goatemalà, ny Sekoly Fianarana mikasika ny fambolena ary ny fikarakarana ny ala, mikasika ny drafitrasa mba hiarovana ny tontolo iainan'ny tapir. Mifantoka amin'ny fanabeazana sy ny fampiroboroboana ireo loharano ara-toekarena azo atao fanolo ho an'ireo vondrom-piaraha-monina eo an-toerana ity drafitra ity.
Mandray anjara ara-bola amin'ny fiarovana ny kovetabe ao Mirador sy ny tapir ny Fonds Global Heritage, manolotra fanadihadiana antsipirihany mikasika ny faritra sy lahatsary iray ny tranonkalany.
Miteraka fanontaniana mifamahofaho ny fiarovana an'io toerana mahafinaritra io, na ilay piramida na ireo tapir, nefa ireo mponina eo an-toerana tena mahantra, mitoka-monina, voahilika. Ny fandraisana andraikitra sy ny fanentanana miaraka ihany no hany tokana mba ahitàna hoe ahoana no handrosoana loharanom-bola hafa ho azy ireo, sy afaka hanavotana ny La Danta sy ireo dantas.
Sary an'i Lala Lulu